Ob-La-Di, Ob-La-Da ngamaBeatles - Izinto Zobugcisa
Ob-La-Di, Ob-La-Da ngamaBeatles
Isihloko sivela kwiqela le-reggae elibizwa ngokuba nguJimmy Scott kunye ne-Obla Di Obla Da Band yakhe. UMcCartney uthi, 'Umntu owayehlala ejikeleza iiklabhu wayedla ngokuthetha ngolwimi lwaseJamaican,' Ob-la-di, ob-la-da, ubomi buqhubeka, 'kwaye wacaphuka xa ndisenza ingoma yawo , kuba wayefuna ukusikwa. Ndathi, 'Yiza, Jimmy, yinto nje yokubonisa.'
Xa uJimmy Scott efuna imali ngebheyile (wayevalelwe entolongweni ngenxa yokulahleka kwentlawulo yesondlo), uMcCartney waba nomhlobo wakhe u-Alistair Taylor wayibeka loo mali ukuze atshintshe amalungelo eScott. UTaylor kwafuneka afumane imali kumhlobo wakhe, kuba kwakungekho mntu kwinkampu yaseBeatles owayephethe imali eninzi.
Chiara - West Vancouver, Canada
I-Reggae ibambe umlilo eMelika kwii-70s zakudala ngokunyuka kukaBob Marley kunye # 1 Johnny Nash hit ' Ndiyabona ngoku ngoku , 'kodwa kwakungekho mkhondo mncinci kwirediyo ye-pop kwii-60s. 'Ob-La-Di, Ob-La-Da' yenye yeengoma zokuqala ezithandwayo zokubandakanya ukubetha kwe-reggae.
UPaul McCartney wabhala oku kwaye iiBeatles zachitha ixesha elininzi zirekhoda kwaye zigqithisile. UJohn, uGeorge noRingo bacaphuka kakhulu. UHarrison wachaza ukukhathazeka kwakhe kwi 'Savoy Truffle,' eyabhalwa kwiinyanga ezintathu kamva. Kwingoma wabhala:
Kodwa yintoni emnandi ngoku, ijike ibe muncu
Sonke siyamazi u-Ob-La-Di, u-Ob-La-Da
Kodwa ungandibonisa, uphi?
UJohn Lennon wayicaphukela le ngoma. Wayengazithandi iingoma ezininzi zikaMcCartney zamva nee-Beatles, evakalelwa kukuba zazingenangqondo kwaye zingenantsingiselo. URingo noGeorge abayithandanga le nto kwaye bobathathu bavotela umnqweno kaPaul wokuba oku kukhululwe kungatshatanga.
Le yayiyi # 1 e-England eNgilane kwiMarmalade ngo-1968. Ngesiqweqwe sabo, uMarmalade waba liqela lokuqala laseScotland ukuya phezulu kwiitshathi zase-UK (eshiya ukuthandabuza okuncinci malunga nemvelaphi yabo, bayicula ingoma Phezulu kweePops ukunxiba iikhilts). Ikwanokuthathelwa ingqalelo njenge-UK yokuqala # 1 ukuba yenziwe kwisitayile se-reggae.
UMassalade's bassist uGraham Knight ukhumbula kwi I-1000 UK # 1 Ukubetha nguJon Kutner noSpencer Leigh, umpapashi womculo weBeatles, uDick James, wasidlalela i-acetate yeBeatles 'Ob-La-Di Ob-La-Da kwaye sasicinga ukuba intle. Uye wathi, 'Ungayifumana, andizukuyinika omnye umntu,' kodwa uyidlulisele kwezinye izenzo ezingama-27. Siyirekhode-siyirekhode ezinzulwini zobusuku ngeveki ye-cabaret kumantla mpuma. Umphathi wethu, owayeseMelika ngelo xesha, wayesithumelela iigrama ukuba zingakwenzi oko. Khange acinge ukuba masirekhode ingoma yeBeatles. Silindele ukuba yenze kakuhle, kodwa khange sicinge ukuba izakuya kwi # 1. Asifumananga mpendulo kwiBeatles kwaphela. Kwakukho amaqweqwe amaninzi ngelo xesha kangangokuba ndingacingi ukuba banokuba nomdla kakhulu.
Ngoku ka i INew York Times , I-Desmond kwingoma yokuvula ibhekisa kuvulindlela womculo waseJamaican uDesmond Dekker.
Ii-guitars zazingaphezulu kwemodyuli ngenjongo yokufumana isiphumo esifunekayo.
Le nto ayikhange ikhutshwe njengelinye ngelixa iiBeatles zisekhona, kodwa ngo-1976 iCapitol Records yakhupha i-'Got To Get You Into My Life 'njengomntu ongatshatanga eMelika, kwaye yenza kakuhle kakhulu, yafika kwi # 7. Ngobungqina bokuba kwakusafuneka izinto zeBeatles, ileyibhile ekhutshwe ngu-'Ob-La-Di, Ob-La-Da 'kamva kulo nyaka yaza yenza # 49.
UPaul ngempazamo wacula 'uDesmond uhlala ekhaya kwaye wenza ubuso bakhe obuhle.' Yenzelwe ukuba ibe 'nguMolly,' kodwa uPaul wagqiba kwelokuba ayishiye ukuze idale ukudideka.
UJohn Lennon wadlala ipiyano kule ngoma.
Njengoko kubaliswa ngumlobi webali yeBeatles uMark Lewisohn, emva kokwenza inani elikhulu (malunga nama-60), uPaul uqhubeke nokuzama ukurekhoda oku njengengoma ecothayo. UJohn wayekwelinye igumbi emamele ngelixa esenza iziyobisi. Emva kokuphakama, wayenxunguphele kakhulu kukuva ukuba uPawulos uyibhale phantsi kancinci amaxesha amaninzi. Uye wangena kwigumbi lokurekhoda, watyhalela ecaleni uPawulos wangena kwipiyano edlala le ngoma ngokukhawuleza okukhulu. Ukurekhoda okukhawulezayo kunye nokonwaba kuludumo I-albhamu emhlophe sisiphumo.
Oku kwasetyenziswa njengengoma yomxholo kuthotho lweTV Ubomi buyaqhubeka eyaqala ngo-1989-1993. Inguqulelo esetyenzisiweyo kumdlalo yaculwa nguPatti LuPone kunye nabanye abadlali.
Ingoma yale ngoma yaphakanyiswa nguNzala ngo-1999 bethetha 'Kutheni Ungafumani Msebenzi? '
NgoDisemba ngo-1968, inguqulelo ebhalwe yiBedrock hit # 20 e-UK.
IiBeatles azikaze ziyenze le nto ngoku, kuba bayeka ukhenketho ngo-1966, kodwa uPaul McCartney wayidlala bukhoma - ekugqibeleni. Wayifaka kuluhlu lweteksti okokuqala ngqa kutyelelo luka-2010 'Up And Coming'.
Umbhali uPaul Saltzman, owayefunda ukucamngca kweTranscendental eRishikesh, eIndiya kunye neBeatles ngoFebruwari 1968, wapapasha incwadi yemifanekiso ngexesha lakhe neqela elibizwa IiBeatles eIndiya , apho uSaltzman ekhumbula ukubukela uMcCartney noLennon besebenzisana kwingoma. Ubhale uSaltzman: 'Ndijonge ngapha nangapha kwinzwane kaPaul, phantsi kwembadada yakhe kukho iqhekeza lephepha elikrazukileyo. Kwaye ndijonge ngapha kokubhaliweyo kwakhe ngu-'Ob-La-Di Ob-La-Da, bra / La-La ukuba buqhubeka njani ubomi. ' Ndihleli ecaleni kweRingo (Starr) - mhlawumbi iinyawo ezintlanu kude noPaul- kwaye baqala ukuyicula kwaye basebenza ngayo. Ngala magama kuphela - nguYohane noPawulos kuphela. URingo wayemamele ethe cwaka. '
DeeTheWriter -I-Saint Petersburg, iRussia Federation, ngaphezulu kwe-2
amazwi ndikuthandile iminyaka eliwaka
Intsingiselo yenombolo 9
besonwabile sonwabile sinamaxesha elangeni
umphezulu womhlaba ujonge phantsi kwindalo
Nceda ungawuyeki umculo iingoma zika rihanna
Mingaphi iminyaka kamichael jackson xa wayecula abc
amazwi endiya kukukhumbula